Madaxweynaha Dowlada Puntland oo ka digay Khatarta Tahriibta ee Dhalinyarada – SBC
Madaxweynaha Dowlada Puntland oo ka digay Khatarta Tahriibta ee Dhalinyarada
Posted by Webmaster on July 29, 2012 Comments
Madaxweyanah dawladda Puntland C/raxmaan Maxmed maxmuud ayaa waxaa uu ka digay Khatarta ka imaan kadha dhalinyarada ka tahriibeysa xeebaha dalka Libiya.
isagoo la hadlaayay BBC-da ayuu sheegay sheegay madaxweyne Faroole in ay jirto Qatar baahasan oo dhinaca Bulshada soomaaliyeed soo wajahday,taasi oo ka imaansay ka dib markii dhamaan dhalinyaradii soomaaliyeed u baxeen dhinaca tahriibka,kuwaasi oo nolol ka wanaagsan mida haatan u ku nool yihiin ka doonanaya dalalka yurub.
Madaxweyanaha ayaa ka hadlay kiiskii ugu danbeyay ee ka dhacay xeebaha dalka Liibiya ka dib markii ay xiriir la soo sameyen dad soomaaliyeed oo doonidii ay saarnaayen matorkii kaga damay xeebaha liibiya kuwaasi oo dalbanaya caawinaad deg deg ah in loo sameyo.
waxaana uu sheegay in durbadiiba ay xiriir la sameyeen ciidamada ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga kuwaasi oo baaritaan ka sameyey meela loo maleynayo in doontaasi ku qaraqantay.balse ciidamada ayaa sheegay in doonta soomaalida saaran tahay ay joogto xeebaha dalka Liibaya isla ,markaasina aysan soo gaadhin biyaha dalka talyaaniga.
Mar la weydiiyay madaxweyne faroole sababaha keentay in dadkani ka firxadaan dalka somaaliya ayuu waxa uu ku jawaabay madaxweynaha in dad baxaya xiligani badi yihiin dhalinyaro,isagoona cadeeyay in dhalinyaradaasi caqliga laga xadday sida hadalka uu dhigay isla markaasina aysan ogeyn halka ay ku socdaan iyo waxa kaga imaan kara.
Isagoona caddeyay in badi dalka soomaaliaya xiligani yahay nabad gaar ahaan magalada caaasimada Muqdisho oo shegay in badi ay tahay xiligani mid nabadgalayadeeda soo noqotay,waxaana uu sheegay in haatan aysan ahayn xili laga qaxo dalka,waxaana uu digniin u diray kuwa dadka dhoofiya ama tahriibiya oo sheegay in ay ka dhowrsadaan nidaamkaas qaldan.
Ugu danbeytiina hadalkani ayaa ku soo beegmaya xili dooni siday ku dhawaad 100 qofood ay muddo 2 casho ah ay dul sabeyneysay xeebaha dalka Liibiya ka dib markii uu ka damay matorkii doontaasi, waxaana dadka doonta saaran oo iskugu jiray rag iyo dumar ay in muddo ah ahaayeen kuwo dul sabeynayay Badweynta,waxaana ugu danbeyntii dib loogu celiyay dalka liibiya oo markii hore ay ka yimaadeen.
Dr faroole waxa uu soo jeediye hadal loo baahnaa iyo wakhti loo bahnaa malin walba dalinyaradii wax ay tahriib ku jiraan si ay ugaaran talyaaniga taas oo an waxba oolan maxaa yeelay farah ayaa lag qaadayee wax ay la kulmaan khatar aad uxun inta ay marayee saxarah iyo Bada